Ungazi kanjani ukuthi umdlwane ngowesifazane noma owesilisa? | Izinja Umhlaba
Lapho i- udoti wemidlwaneEkuqaleni kunzima ngandlela-thile ukukhomba ngokusobala ukuthi owesilisa noma owesifazane, ngakho-ke esihlokweni sanamuhla sizokunikeza imininingwane eminingana yokubona ubulili bomdlwane.
Ukwazi ubulili besilwane kuzokusiza ezintweni eziningi, kuqala ngokukhetha igama. Ngakho-ke, ake sibone ukuthi singahlukanisa kanjani owesilisa kowesilisa, lapho inja isencane.
1 Kungani kubalulekile ukwazi ubulili bemidlwane?
2 Ngakho-ke ungabona kanjani ukuthi umdlwane owesilisa noma owesifazane?
2.1 Ezinye izindlela zokuthola
3 Ngabe ukuchama kungasiza ukuthola ukuthi umdlwane owesilisa noma owesifazane?
4 Yikuphi okungcono: ukuba nenja yowesilisa noma yowesifazane?
5 Njalo qaphela futhi uqaphele
Kungani kubalulekile ukwazi ubulili bemidlwane?
Kukangaki uhamba nenja enoboya emgwaqweni noma epaki bese uzwa ibinzana elithi "Inja enhle kanjani", ngingayiphathisa? " Futhi ulungise kangaki ngobumnene, "Ngempela kungowesifazane"? Kungenzeka nakuwe ukuthi unguye ukwenza lelo phutha elifanayo ngaso sonke isikhathi nezinja zabanye abantu.
Uma usanda kuthola noma ulungiselela ukwamukela i- udoti wemidlwane futhi abantu bakucela ukuthi uthathe eyodwa kanye nobulili obuthile engqondweni, kufanele ufunde kusukela ebusheni obudala okungabesifazane nabesilisa.
Abanye abantu bayakhetha futhi bacela imidlwane yesilisa noma yesifazane, njengoba besho njalo abesifazane bathulileMhlawumbe kungenxa yokuthi babe nokuhlangenwe nakho okungcono ngocansi olulodwa lwenja kunolunye, ngoba izizathu zingase zibe nzima ukuzihlaziya futhi kungenzeki ukuziqonda noma ukubikezela.
Ungakhathazeki, kuzoba lula kakhulu ukwazi i- ubulili bezinja uma laba sebesuliwe.
Ngakho-ke ungabona kanjani ukuthi umdlwane owesilisa noma owesifazane?
Eqinisweni, kunendlela yokufunda umehluko phakathi kwemidlwane yabesifazane neyabesilisa, noma kunjalo, hlakanipha futhi ubekezele futhi ukuthi ubudlelwano phakathi kwemidlwane ezisanda kuzalwa nonina bungaba buthakathaka kakhulu, ngoba ukuthatha ingane injanyana kunina isikhathi esingaphezu kwemizuzu embalwa emasontweni okuqala ngemuva kokuzalwa kungashintsha isibopho sabo. Umama angaxwaya umdlwane ochitha isikhathi esiningi kude naye nakudoti wonke.
Ngokuyisisekelo, amawundlu angamaduna angahlukaniswa ngezimpawu ezimbili eziyindilinga eziphakanyisiwe esiswini sawo. Abantu bavame ukubuza ukuthi ikuphi inkinobho yesisu senja?
Ngokungafani nabantu, indawo lapho inkaba ibifakwe khona enjeni iyanyamalala, ilulame ngokushesha, inkaba ibe ngaphansi kwesisekelo sezimbambo. Cishe nge-intshi ngale, kuzoba nenye indawo encane eyindilinga, okuyilapho ipipi lizovela khona.
Imidlwane yabesifazane izoba nophawu lwenkaba kuphela, nazo zonke ezinye izisu zabo ezingagqokile. Ukuhlolisiswa kwangemuva komdlwane wesifazane, kusukela phansi komsila kuya ekuqaleni kwesisu esingezansi, kuzoveza ukuvuleka okubili. Indunu, empeleni, izoba ngaphansi nje komsila, kanti imvubu izoba yisakhiwo esincane, esime njengeqabunga, esisondele cishe phakathi kwemilenze.
Ezinye izindlela zokuthola
Ngeso lochwepheshe, akudingekile ngaso sonke isikhathi ukuhlola indawo yesitho sangasese sesilwane, noma ngabe impela kuyinto okufanele yenziwe uma kuvela ukungabaza okuncane. Kepha, ngaphandle kwezici esishilo, kuneminye imininingwane enconywa kakhulu ukuthi ibhekwe. Isibonelo, ekuziphatheni kwabo nasekuhambeni kwabo.
Abesilisa bathambekele ekubeni rougher, abanonya ngokwengeziwe futhi bayaphuma; ngakolunye uhlangothi, abesifazane bavame ukuba nokuthula kancane. Yini enye, amakhanda abesifazane avame ukuba nezici ezinhle, eziyindilinga.
Ngabe ukuchama kungasiza ukuthola ukuthi umdlwane owesilisa noma owesifazane?
Abanye bangahle bathimaze kulo mbuzo, becabanga ukuthi izithombe ezikhohlisayo zemikhuba yokuchama kwezinja esezikhuliswe ngokuphelele, njengezinja zesifazane eziklabalazayo nezinja ezikhahlela phezulu, kuzokwenza umehluko ucace ngokwanele.
Emidlwane yezingane, noma kunjalo, umuntu kufanele akhumbule ukuthi njengoba izindlwana zezinsikazi zikhula futhi zivuthwa, imidlwane yabo bobubili ubulili ingquza Futhi ukuthi izikhundla ezithathwa yimidlwane aziguquki isikhashana ngemuva kokubeletha.
Yikuphi okungcono: ukuba nenja yowesilisa noma yowesifazane?
Kuzoncika kakhulu kulowo nalowo. Uma ungibuza Ngikhetha owesifazane, ngoba ngokuvamile banomoya ophansi futhi bathandana kakhulu. Kepha ngazazi izinja zesilisa ezazizinhle: zihlakaniphile, ziyadlala, futhi kungani ungasho njalo? Yinhle.
Esikhundleni sokukhetha inja yezocansi zayo, ngincoma ukuthi ngiyikhethele umlingiswa wayo. Ngaphambi kokumyisa ekhaya, chitha isikhathi esithile naye, udlale naye, uhambe naye uma esenayo imigomo edingekayo.
Yize isimilo somdlwane singashintsha eminyakeni edlule, uma ngesikhathi sentsha yaso bekuyisilwane esinovalo kakhulu, leyo yinto engeke ishintshe. Ungakhululeka, kunjalo, kepha ngeke ulahlekelwe yileso nerve.
Ngakho lokho uma ungumuntu ozolile, khetha umdlwane onje Futhi, ngale ndlela uzozwana kangcono kakhulu.
Njalo qaphela futhi uqaphele
Imidlwane iqala ukufunda kunina lapho izalwa, ngakho-ke ukulanda imidlwane esanda kuzalwa kaningi ngaphambi kwamasonto amathathu kuya kwamane ubudala kubeka engcupheni yokuthi gcina izinyane kude nonina, ezingabangeli ukucindezeleka kuphela, kepha nokuhlukumezeka ezinganeni ezisanda kuzalwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Ungazi kanjani ukuthi umdlwane ngowesifazane noma owesilisa?